Uhlaselo olothusayo lwaseHawaii olwenziwe yiChina neRussia, izidubedube zase-Eswatini zaziza kubhalwa eTaiwan kuyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » Uhlaselo olothusayo lwaseHawaii olwenziwe yiChina neRussia, izidubedube zase-Eswatini zaziza kubhalwa eTaiwan kuyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba Eziphulayo Eswatini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Julayi 1, 2021
I-Russia i-China Intetho yenyukliya
Ibango lase China ngaphezulu kweTaiwan libonakala lisisisongelo kwihlabathi liphela. Ukuzivocavoca emkhosini i-200 yeekhilomitha kude nonxweme lwaseHawaii, igosa laseJapan elilumkisa i-US ngokuhlaselwa kwe China ne-Russia, ukuzama ukubhukuqa urhulumente ku-Eswatini Kingdom, kunokuba yinto enxulumene kakhulu.
Ngaba iHawaii isongelwa ngohlaselo olunokwenzeka ngeRashiya nase China ngaphezulu kweTaiwan?
Ubukumkani base-Eswatini bakwimeko yesiphithiphithi emva kokuba ihlokondiba labavukeli bangaphandle bezama ukubhukuqa ubukumkani. Oku kunokuba kunxulumene kakhulu nembambano yase China- Taiwan
I-US ibugcinile ubudlelwane obunobuhlobo kwaye yanikezela ngezixhobo zokunceda iTaiwan. I-Eswatini kuphela kwelizwe lase-Afrika elinobudlelwane bezopolitiko no-Taiwan. Akumangalisi ukuba i-US yakha i-ambassy enkulu kule mbuso encinci yabantu abangaphantsi kwezigidi ezi-2.
Kwiiveki nje ezimbini ezidlulileyo IiJets zaseMelika zokuLwela Kwafuneka ukuba ahambe ukulawula umthambo waseRussia emanzini kufutshane ne-US Pacific State yaseHawaii.
"Kufuneka sibonise ukuthintela ukuya e-China, hayi i-China kuphela kodwa nama-Russia, kuba, njengoko benditshilo kuni, ukuba benza umthambo kunye," usekela-Mphathiswa Wezomkhosi wase Japan u-Yasuhide Nakayama tindala i-Hudson Institute kule veki.
Ukuba ujonga iindaba ezivela kuZvezda, eyingxelo yaseRussia, iindaba ezivela emkhosini waseRussia, bayazivocavoca ngoku kanye phambi kweHonolulu.
Kwaye kukho iinqwelo zokulwa, iinqanawa zenyukliya kunye neenqwelo-moya ezinkulu. Kwaye bazilolonga kanye kanye phambi kwendawo eseNtshona ye-Honolulu.
Andifuni ukukhumbuza iminyaka engama-70 eyadlulayo iPearl Harbour yahlaselwa ngumothuko. Kuya kufuneka silumkele olo tyelelo lomkhosi olwenziwa ngamaRussia.
Ayisiyongozi, amaRussia akhethe indawo, icala lasentshona le-Honolulu, eHawaii. EHawaii, kukho iinqanawa ezisixhenxe zase-US kunye ne-PACOM izinze eHawaii.
Inqanawa yase-Russian spy ibethelelwe emantla e-Oahu, IHawaii, ngokwengxelo yolu papasho.
I-White House, urhulumente wase-United States naye wenze intetho malunga ne-Hong Kong.
Ukuba semngciphekweni kweTaiwan kuhlaselo oluvela kwilizwekazi lase China kuye kwaba yinto ephambili kubacwangcisi be-Indo-Pacific kwiinyanga nje ezidlulileyo, njengoko imikhosi yamaKomanisi yaseTshayina isonyusa ukuqhelana kwabo nomkhosi esiqithini. UNayayama, owayethethe phandle ngokungaqhelekanga malunga nesidingo samazwe olawulo lwentando yesininzi ukuqinisekisa ukuba iTaiwan iyasinda, watsho ukuba iRussia ne China zisebenza njengamahlakani zilungiselela umlo omkhulu ne-United States.
Abantu baseTaiwan ngokwenene banekhonsathi. Bajonge kula mazwe mabini makhulu asebenzisanayo kwaye [babonisa] isoyikiso esikhulu eTaiwan. ”
Amagosa obuKomanisi baseTshayina ayithathela ingqalelo iTaiwan njengephondo elihlubukileyo, elinye abathi balibanga ukusukela ekungeneni kwabo kulawulo ngo-1949 kodwa zange balawule. Uninzi lwamazwe alwamkela ulawulo lwaseBeijing njengorhulumente wase-China osemthethweni kwaye abanabudlelwane obusemthethweni no-Taiwan, nangona i-US igcine ubudlelwane obunobungane kwaye yanikezela ngezixhobo ukunceda abasemagunyeni baseTaiwan banqanda uhlaselo oluvela kwilizwekazi.
"Kufuneka sikhusele iTaiwan njengelizwe ledemokhrasi," usekela-Mphathiswa Wezomkhosi waseJapan uNakayama.
Esi isenokuba sesona sizathu sokuba kwelinye icala lehlabathi, kubukumkani obuncinci base-Eswatini obunabantu abayi-1.3 yezigidi, i-US yenye yezona zikhulu zinkulu zozakuzo emhlabeni.
I-Eswatini kuphela kwelizwe e-Afrika eliqonda ilizwe laseTaiwan njengelizwe. I-United States ibonakala ngathi inomdla kule meko. I-China inomsindo kwaye mhlawumbi ibangelwe zizidubedube ezikhoyo kunye nokubhukuqa iinzame e-Eswatini. Owayesakuba ngumphathiswa wezangaphandle kwi-ZImbabwe, uWalter Mzembi unikezele ngemvelaphi eTurboNews kwangoko kule veki kwinqaku elinesihloko esithi: I-Eswatini ibanjwe phakathi kwe China ne Taiwan.
Isithethi se-China samazwe angaphandle u-Wang Wenbine uchaze ingxelo yase-Japan malunga nohlaselo olunokwenzeka e-Hawaii njengeyona inobungozi kwaye wakhubeka eJapan ebiza iTaiwan njengelizwe. Uthe: "Siyacela iJapan ukuba icacise ukuba i-Taiwan ayililo ilizwe, kwaye iqinisekise ukuba izinto ezinjalo aziphindi zenzeke."
UNayayama ugxininise ukuba ukungavisisani kwingingqi ye-Indo-Pacific kunempembelelo ngqo kukhuseleko lwaseMelika, ngakumbi ekukhanyeni kolungelelwaniso phakathi kwe China ne Russia. Wayigxininisa le ngongoma ngokukhumbuza ngohlaselo olothusayo lwaseJapan ePearl Harbour kwiminyaka engama-70 eyadlulayo, eyabangela ukuba kungenelele umkhosi wase-US kwiMfazwe yesibini yeHlabathi.
Amagosa aseRussia achaze "imijukujelwa yabo kunye nemipu yabo" ePacific njengesixhobo sokujonga. ENakayama, imisebenzi enjalo iyenza icace into yokuba iJapan ne-US banengxaki efanayo efuna ukunqandwa ngokudibeneyo.
Iinkokheli zase-US nase-Japan bathi bazakuqinisa izixhobo zabo zokulwa izoyikiso ezivela e-China nase-North Korea, kubandakanya ne-Beijing e-Taiwan, njengoko abaphathi be-Biden bezama ukuseka ubukho kulo mmandla.